RASMI: Mario Rui oo ku biiray kooxda SSC Napoli + Sawirro – Gool FM
RASMI: Mario Rui oo ku biiray kooxda SSC Napoli + Sawirro
Raage July 13, 2017
(Napoli) 13 Luulyo 2017 – Kooxda SCC Napoli ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay qaadatay dadabka bidix ee Mario Rui oo ay kasoo qaateen kooxda AS Roma isagoo ku imanaya amaah ay khasab tahay in la iibsado.
Kooxda Napoli ayaa webkeeda ku xaqiihisay imaanshiyaha Mario Rui iyagoo soo dhigay sawir muujinaya isagoo la fadhiya madaxwaynaha Partenopei jaalle Aurelio De Laurentiis [sawiran].
Napoli ayaa laacibkan reer Portuguese ku qaadanaysa amaah soconaysa ilaa 20-ka Juunyo 2018, iyadoo amaahda hore ku bixinaysa €3.75m iyadoo marka dambe ku khasban inay bixiso €5.5m oo kale, taasoo ka dhigan lacag ka badan €9.25milyan oo euro.
26-jirkan oo Giallorossi ku biiray 2016-17, ayaa dib ula midoobaya Maurizio Sarri, kaasoo ay isla joogeen kooxda Empoli ee reer Tuscania min 2013 ilaa 2015.
Benvenuto Mario ! #ADL pic.twitter.com/2KlaUZUnBe
— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 13 juli 2017
Booliiska canshuuraha oo baaritaan ku sameeyay dooni uu ku tamashlaynayay Cristiano Ronaldo!
XOG: AC Milan & Leonardo Bonucci waxaa kala xigta €10m oo euro oo qura